भाइ बहिनीको खुन बेचेर थुपारेको पैसाले विनय तामाङहरूले जाति किन्ने प्रयास गर्दैछन्, जातिले यो कर्तुतको जवाब दिनुपर्छ- विमल गुरुङ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारभाइ बहिनीको खुन बेचेर थुपारेको पैसाले विनय तामाङहरूले जाति किन्ने प्रयास गर्दैछन्, जातिले यो कर्तुतको जवाब दिनुपर्छ- विमल गुरुङ
भाइ बहिनीको खुन बेचेर थुपारेको पैसाले विनय तामाङहरूले जाति किन्ने प्रयास गर्दैछन्, जातिले यो कर्तुतको जवाब दिनुपर्छ- विमल गुरुङ
May 7, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
‘अहिले पैसाको चलखेल भइहेको छ। लाखौं पैसा खर्च गरेर, युवा, समाजलाई, जातिलाई किन्ने प्रयास गरिरहेको छ। कसले किन्दैछ? बङ्गालले। बङ्गालका दलालहरूले,’ विमल गुरुङले भनेका छन्, ‘13 जना भाइ बहिनी मार्ने, भाइ बहिनीको खुन बेचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूले। पैसाको चलखेल गरेर जाति किन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जसलाई सफल हुन दिनु हुँदैन।’
सिलगढी,7मई
गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङले विनय तामाङले आफ्नै सन्तानको रगत बेचेको पैसाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जाति र समाज किन्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘हाम्रो जातिले पैसामा बिक्री भएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको छैन। विमल व्यक्तिगत कुरामा हो भने हार्थे होलान्, तर म जातिको काम गरिरहेको छु, जातिको लागि कहिल्यै हार्न चाहन्न। मैले जाति, भाषा, संस्कृतिको लागि काम गरेको छु,’ गुरुङले भनेका छन्।
गुरुङअनुसार विनय तामाङले चुनाउ जित्न पैसाले भोट किन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ‘अहिले पैसाको चलखेल भइहेको छ। लाखौं पैसा खर्च गरेर, युवा, समाजलाई, जातिलाई किन्ने प्रयास गरिरहेको छ। कसले किन्दैछ? बङ्गालले। बङ्गालका दलालहरूले,’ विमल गुरुङले भनेका छन्, ‘13 जना भाइ बहिनी मार्ने, भाइ बहिनीको खुन बेचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूले। पैसाको चलखेल गरेर जाति किन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जसलाई सफल हुन दिनु हुँदैन।’
गुरुङले आफूहरू भने कहिल्यै बिक्री नभएको र हुन नचाहने बताउँदै समाजले यस्तो कलङ्क बोकेर बाँच्न पनि नहुने बताएका छन्। ‘मलाई विश्वास छ, मेरो जाति पैसामा बिक्री हुने जाति होइन। पैसामा बिक्री हुने समाज होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘हो निरज जिम्बासित पैसा छैन। उनीसित गाडीमा तेल हाल्ने पैसा पनि छैन। उनलाई पार लगाऔं। उनलाई पार लगाउनु नै जातिलाई पार लगाउनु हो। यसैले हामी एकएक रुपिया बटुल्दैछौं।’
उता विनय तामाङले भने दुइतीनवर्षमा धाँधली गरेर, हिनामिना गरेर थुपारेको पैसा, करोडौं करोडौं खर्च गरेर हिँडिरहेको अनि ठेकेदारहरू पनि पिछेपिछे पैसा बोकेर हिँडिरहेको र जहाँ चाह्यो, पचास पचास हजार, लाख रुपियाँ खर्च गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘म सबैलाई बिन्ती गर्छु यो कुरा बुझ्नेछन्। भोट आउने बेलामा, व्यापारीहरूलाई विनयलाई भोट दिएन भने , दोकान लगाउन पाउँदैनौं भनिरहेका छन्। शिक्षकहरूलाई भोट नदिए ट्रान्सफर गर्ने भन्दैछन्। अस्थायीहरूलाई पनि धम्की दिँदैछन्। हामीले सहँदैछौं। 2017 देखिको बङ्गालको तानाशाही देखेका छौं। त्यसैको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैछौं। दुइ पैसाको लोभ देखाएर किन्ने काम नगर। दाजु बाइहरूले पनि पैसा दिन्छ भने थाप्नु, तर जातिमाथि धोका नदिनुहोस्। उनीहरूसित पैसा छ, बङ्गालको जम्मै मिशनरी लागेर जातिलाई नाश गर्न खोज्दैछन्,’ गुरुङले भनेका छन्।
गुरुङले निरज जिम्बालाई भारी मात्रामा भोट दिएर विनय तामाङलाई जवाब दिनुपर्ने अपील पनि गरेका छन्। ‘विनय तामाङहरूको काला कर्तुत, कुड्की गर्ने, आन्दोलनकारीहरूलाई जेल हाल्ने, जेल, पुलिस लगाउनेलाई जनताले जवाब दिनुपर्छ। विनयहरूले पनि धम्काएर, जेल हालेर, पैसाले किनेर कति दिन राजनीति गर्ने? समाजलाई बेचेर स्वार्थको राजनीति नगर,’ उनले भनेका छन्, ‘म जनसाधनण जनतालाई अपील गर्न चाहन्छु। सबैलाई अपील गर्छु, हामी यसैको विरुद्ध आन्दोलनमा छौं। बाटोमा चुनाउ पऱ्यो र निर्वाह गर्दैछौं। उपचुनाउमा निरज जिम्बालाई जिताएर पठाउने निर्णय गरेका छौं। कन्ट्याक्टरहरूले पनि पैसाको चलखेल गरिरहेका छन्। जुन प्रकारको खर्च गरेर जातिलाई मास्ने काम गर्दैछन्, त्यसको जवाब पनि जनताले दिनेछन्।’
परशुराम जयन्ती पालन